Abavelisi beengubo zeengubo, abaxhasi -Ingubo yempahla yase China
Ingxowa yengubo enokuphinda isebenze
Ingxowa yengubo, ikwabizwa ngokuba yingxowa yesuti okanye iingubo zembatho, zihlala zisetyenziselwa ukuhambisa iisuti, iibhatyi kunye nezinye iimpahla. Impahla inokukhuselwa eluthulini ngengxowa yengubo. Abantu bahlala bexhoma ngaphakathi kunye neendawo zabo zokuxhoma kwindawo ye-closet.
Ingxowa yomtshato yesiqhelo
Ingxowa yomtshato yomtshato, ikwabizwa ngokuba yingubo yokukhusela. Abantu banokuyithenga kwivenkile yomtshato, ezivenkileni nakwezinye iivenkile zeempahla. Umbala ophambili wale ngxowa yomtshato umnyama, kwaye uhambelana nengwevu.